★မြန်မာ့အလင်း★: လူသားတွေအတွက် Islam Sucks
လူသားတွေအတွက် Islam Sucks
လူတိုင်း.. လူတိုင်း . . .အများအကျိုးအတွက် တနေ့ကို ၁၀ မိနစ်- ၁၅ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် လူ့လောကကြီးဟာ သာယာဝပြော လာမှာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ ဦးသန်းရွှေကို ဝေဖန်မယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်တင်မယ်။ ကိုယ့်အဖိုးအရွယ်၊ ကိုယ့်အဖွားအရွယ်တွေကို ဆဲဆိုမယ်။ ဒီမိုအဖွဲ့တွေ မစည်းလုံးတာကို ဆရာကြီးအထာနဲ့ ညီညွတ်ဖို့ သြေ၀ါဒပေးမယ် စသဖြင့် အကျိုးမရှိတဲ့ အလုပ်တွေမှာ အချိန်ကုန်ခံနေပါတယ်။ အဲလို ဆရာကြီးအထာနဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ် စောက်တင်းပြောရတာကို နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ တလွဲမှတ်ယူနေပါတယ်။ အဲလိုအကျိုးမဲ့တွေလုပ်နေတာ ပြန်တွေက်ကြည့်ရင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား?
အားမငယ်ပါနဲ့ .. သန်းခေါင်ထက် ညည့်ပိုမနက်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် တဖြေးဖြေးနဲ့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးမယ့် လူငယ်တွေ ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ သူတို့က ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ Islam Sucks ဆိုတဲ့ ဘလော့တစ်ခု တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိတဲ့ Islam Sucks ဘလော့ တည်ထောင်သူတွေကို လေးစားပါတယ်။
တခြားမြန်မာတွေကလည်း ကျနော်တို့ ဘလော့ လင့်တွေကို မျှဝေပေးရင်း မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီး အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့် အနေဖြင့် ကူညီဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားပြီး တရားမျှတမှု လိုလားတဲ့ ကုလားတွေလည်း ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီး အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ လက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေး မြန်မာ့ ဘလော့များ
http://islamsucks.wordpress.com/ (allah.is.sucking.my.dick@gmail.com )
ဆောင်းပါး၊ ကဗျာတွေ ရေးသားပြီး မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး ကူညီလိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ email တွေကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:21 AM
မွတ်ဆလင်တို့၏ ဂုစ်ယူဖွယ် စောက်ရှက်မရှိတဲ့ Mujra အ...
US is prison capital of the world (w/commentary by...
RON PAUL WHAT IF The American People Learn Truth
EMERGENCY - SPREAD THIS VIDEO! AVIAN/SWINE FLU - F...
Privatization of Punishment
Information you must spread - Truth about FEMA cam...
SWINE FLU, AND QUARANTINE CAMPS!!!
thoughts on swine flu 4/25/09
Swine Flu--A Scare Tactic?
Mandatory Volunteerism HR 1388
‘Obama Host Died From Swine Flu’ Story Apparently ...
Swine Flu - False Flag Operation?
Bagan - Puppet Show
Pakistańskie party / Pakistan Party
Come to Myanmar
Indo-Bangladesh border sealed
India is Fencing its Borders to Keep Out Muslim Te...
ဂျူးစစ်သားက မွတ်ဆလင်ကို ဒီလိုမြင်တယ်ဆိုပဲ
The black stone is God Vagina mohammed kissed
Islam: Truth Behind Temple of Mecca & the Black St...
Maryam Namazie Ex-Muslim UK
Why did we leave Islam?
What are the problems that we face as Apostates?
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ကူညီပါ (ရခိုင်တေး)
တရုပ်ကြီးလည်း အာကာသကိစ္စ လိမ်တယ်ဆိုပဲ
လွတ်လပ်စွာ ဖာခံနေတဲ့ မွတ်ဆလင်မတို့ရဲ့ ဖာတန်း
မွတ်ဆလင်ယောကျားအဆင့်ကတော့ သူ့မိန်းမကို ဖာခံခိုင်းပ...
Pakistani Lesbian Girls Kiss
Sex in Mosque
Muslim Sunni Imam Getting Serviced By A Whore In T...
ကလေးတွေရှေ့မှာ မွတ်ဆလင်မိခင်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း
သမီးကို ခွေးများလိုပဲ သံကြိုးနဲ့ချီတတ်ပါတယ်
သို့ / ဒေါက်တာလွန်းဆွေ
တရား မှတ်စုများ - အပိုင်း ၃
တရား မှတ်စုများ - အပိုင်း ၂
တရား မှတ်စုများ - အပိုင်း ၁
ကုလားတွေက ညီညီညွတ်ညွတ် အကောက်ကြံနေတယ်။ မြန်မာတွေကဘ...
Blind Date Saudi Arabia
ဗြောင်လိမ်တတ်တဲ့ ကုလားအကြောင်း သိပါစေ
ဟန်ဆောင်တိုင်းရင်းသား နှင့် အများအကျိုးစိတ်မ၀င်စား...
မြန်မာတွေ… တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေမှာလား?
၁၃၇၁ နှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အေးချမ်းသာယာပါစေ
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန် နှစ်သစ်မှာ စုစည်းကျပါစေ
ploan song=karen song
Welcome to Karen State
Myanmar - Gi-Ta-Thwar-Yar-Ka-Han-Par-Dance
ploan song = karen song
Arakan Cultural Dance
Kwe Ka Baung Tha Theat
နိပေါမှ မျိုးဆက်သစ် သံဃာတော်နှင့် သီလရှင်များ
Taiwan မှ မြန်မာတို့၏ သင်္ကြန်
burmese drum contest ประชันเปิงมาง
ပိတောက်တစ်မျက်နှာ---- Rzarni ( R ဇာနည် )
Man Taung Yite Ko ( မန်းတောင်ရိပ်ခို ) --- Group
Marma (ရခိုင်) သီချင်း
Ah Pyo Daw Nat Chin
Mon Traditional dance
TP Myanmar Thingyan 2008
2007 Thingyan days in Mandalay
2007 LA THINGYAN
Ye Lay & Thiri - Past Thingyan
Myanmar Water Festival in Ulsan, South Korea
Arakan Water Festival
Time to say hello - Intro — Thingyan
133 temples demolished in four years in Malaysia
A Little Buddhist Mindfulness Would Be Good For Th...
Jet Li almost quit for Buddhism
Sarah Jessica Parker: Hollywood's Newest Jew-Bu?